Gobaladda Waqooyi oo 'ogolaatay' dalabka MAREYKANKA ee - Axadle Wararka Maanta
Hargeysa (Axadle) – Gobaladda Waqooyi ayaa mabda’ ahaan ogolaatay inay qaadato qaxooti kasoo jeeda dalka Afghanistan, sida uu Jimcihii sheegay sarkaalka tirsan Wasaaradda Arrimaha Dibedda.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibedda Gobaladda Waqooyi ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in Hargeysa ay wada-hadallo la gashay saraakiisha Mareykanka, oo ku saabsan inay si ku-meel gaar ah u marti-geliso qaxootiga Afghanistan.
“Waxaan mabda’ ahaan ogolaanay inaan marti-gelino qaxootiga Afghanistan, si ku meel-gaar ah,” ayuu yiri sarkaalka reer Gobaladda Waqooyi ee la hadlay AFP, isaga oo intaas ku daray in heshiiska arrintan ku saabsan uu weli marayo marxalad horudhac ah, ayada oo weli arrimo farsamo ay u baahan yihiin in laga shaqeeyo, sidoo kalena aan taariikh loo goyn waqtiga imaanshahooda.
Haddii qaxootigan la geeyo Gobaladda Waqooyi, waxay halkaas joogi doonaan illaa Mareykanka uu ka diyaariyo Visa-ha ay ku galayaan dalkaas, taasi oo qaadan karta bilo ama sanado.
Gobaladda Waqooyi ayaa sheegata inay ka go’day kana madax-banaan tahay Soomaaliya inteeda kale, hase yeeshee ma haysato aqoonsi caalami ah.